သက်ဝေ: Loving can hurt...?
• Love hurts •
အစဉ်အမြဲမဟုတ်တောင် အခါများစွာမှာတော့ ချစ်ခြင်းဟာ (တကယ့်ကိုပဲ) နာကျင်ရပါတယ်။ အချစ်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမှ၊ ချစ်တဲ့သူက ငြင်းပယ်တာ ခံလိုက်ရမှ၊ တခြားသူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေတာကို ငေးမောရင်း မနာလိုဝန်တိုနေရမှ၊ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ရင်း လွမ်းဆွေးနေရမှ နာကျင်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နေရချိန်တွေမှာလည်း နာကျင်မှုတွေဟာ (ဖိတ်ခေါ်စရာမလိုပါပဲ) သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရောက်လာတတ်တာပါပဲ။ ဟိုးမှာ မြင်နေရတဲ့ မြက်ခင်းစိမ်းတွေဟာလည်း နာကျင်မှုပဲ၊ ကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်တစ်စဟာလည်း နာကျင်မှုပဲ၊ River Seine ထဲကို ပစ်ချဖို့ ကြိုးစားမိတဲ့ သော့တစ်ချောင်းဟာလည်း နာကျင်မှုပဲ၊ သီချင်းတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်ကြောင်း၊ စကားတစ်ခွန်း၊ ပန်းချီကားတစ်ချပ်၊ အကြည့်တစ်ချက်နဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အထိအတွေ့တစ်ခု၊ ပြီးတော့ အလှမ်းဝေးနေတဲ့ ဆုံမှတ်တွေ၊ တိတ်တဆိတ် သိမ်းဆည်းထားရတဲ့ လွမ်းဆွတ်တမ်းတမှုတွေ၊ (ဒီလိုပဲ) ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ (ပြုံးရင်း) ငေးကြည့်နေလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်တွေ… အနာကျင်ရဆုံးပဲ။ ချစ်ခြင်းရဲ့ အတိမ်အနက်ကိုလိုက်လို့ နာကျင်မှု ပုံရိပ်တွေသာ အမျိုးမျိုး ပြောင်းသွားမယ်၊ နာကျင်ရတာကတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီချစ်ခြင်းကြောင့်ပဲ ကြည်နူး ချမ်းမြေ့ရ၊ ဝမ်းသာ ပျော်ရွှင်ရ၊ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ သက်တောင့် သက်သာဖြစ်ရတဲ့ အချိန်တွေလည်း (အနည်းငယ်) ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာတော့ ဝန်ခံရမှာပဲ။ တကယ်တော့ ချစ်ခြင်းဟာ စကားလုံးတွေနဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ဖွင့်ဆိုလို့ မစွမ်းနိုင်အောင် ဆန်းကြယ်လှပါတယ်။
လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ်စီဘ၀တွေမှာ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး လှပဆန်းကြယ်တဲ့၊ အစစအရာရာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးကိုသာ အလိုရှိကြ၊ တောင့်တတတ်ကြစမြဲ ဖြစ်ပေမယ့် တခါတရံမှာ ကိုယ်တိုင် ကြိုတင် မမြင်နိုင်တဲ့၊ ကိုယ်တိုင် မျှော်လင့်မထားတဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ သူ့အလိုလို ရောက်ရှိ ဖြစ်တည်လာတတ်တဲ့ နားလည်ဖို့လည်း သိပ်ခက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးတွေ၊ လွယ်လင့်တကူ ကြိုဆို လက်ခံယူလို့မရပဲ ငဲ့ညှာထောက်ထားစရာ၊ သတိထား ထိန်းချုပ်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးတွေအပြင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖွင့်ဟစရာမလိုပဲ နားလည်ရင်း နှလုံးသားထဲမှာ (ထာဝစဉ်) နွေးထွေးစွာ အမြစ်တွယ် ရှင်သန်နေနိုင်တဲ့ လေးနက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးတွေလည်း ရှိနေတတ်စမြဲပါ။
ဘယ်လို ချစ်ခြင်းမျိုးမဆို နာကျင်မှုကနေ (ဘယ်တော့မှ) မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေလို့ ကိုယ်ကတော့ နာမည်တပ်ချင်တာပါပဲ…
(၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇)
၂၀၁၈ ဖေဖေါ်ဝါရီ - Idea Magazine က Loving can hurt...? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ရေးပါတယ်...
Posted by သက်ဝေ at 10:10 PM